နိုင်ငံအရေး ခရီးကြမ်း ဘယ်လဲ ဘာလဲ.... (၄) ဆောင်းပါးရှင် (ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
နိုင်ငံအရေး ခရီးကြမ်း ဘယ်လဲ ဘာလဲ.... (၄) ဆောင်းပါးရှင် (ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
နိုင်ငံအရေး ခရီးကြမ်း ဘယ်လဲ ဘာလဲ.... (၄)
နောက်တခုက အခုနိုင်ငံတကာမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးတင်ရေးကိစ္စ။
ဒါဟာ သက်သေခိုင်လုံရင် သန်းရွှေ ကိုကြိုးကွင်းစွပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စ။ အော်နေရုံနဲ့ မရနိုင်ဘူး။ ဦးတင်ဦး ဒေါ်စုတို့က အစိုးရနဲ့ ညှိနိုင်းရပါမယ်။ ခပ်မာမာကို ရပ်တည်ရပါမယ်။ ညှိနိုင်းရမှာက ဒီပဲယင်းမှာ အဓိကတာဝန်ခံ သန်းဟန် ကအခုဆို နေပြည်တော်မှာ ပါဝါတော်တော်ကြီးနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။ ဒီပဲယင်းအပြီး ချက်ချင်းနေ့ချင်းညချင်း ဗိုလ်မှုးချုပ် အဆင့်တိုးပေးတယ်။ မကြာဘူး ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် တိုးပေးပြီး သူရဲ့ အဓိကတာဝန်က နေပြည်တော် ကုလားထိုင်ကို လှုပ်လာသူကို သုတ်သင် အပြတ်ရှင်းဖို့တာဝန်။ ဒီအဖွဲ့ ကို ယခင်က ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေက ဦးစီးတယ်။ အခုဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေတို့ တဖွဲ့လုံးကို ဖမ်းထားတယ် (သတင်း မထုတ်သေးဘူး)။ သန်းရွှေအတွက် အရေးတကာ့ အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်။ တနည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးစေချိန်မှာ အပြုသဘော ဆောင်တယ် ပြောနေကြသူတွေ အပြုသဘောကို တကယ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သန်းဟန်ကို အရင် အနားပေးထားရပါမယ်။ အခုတော့ ရာထူးတိုးပြီး တပ်ချုပ်ကြီးကို တာဝန်ခံဖို့ အထူးခန့်ထားတာ။ လူတွေဘဲ နဲနဲတွက်ဆကြည့်ကြပါ။ ဒီလူဟာ ဒီပဲယင်းမှာ ဒေါ်စုကို မလုပ်ကြံလိုက်ရတာကိုပင် ဒေါသတချောင်းချောင်း ထွက်ပြခဲ့သူပါ။
ဒီလူကို အထူး ရာထူးပေးထားသမျှ အပြုသဘော ဆောင်တယ် ပြောနေသူတွေ ဘယ်နှစ်တုံး ဆက်စားချင်နေကြသလဲဘဲ မေးရပါမယ် ။
အပြုသဘောလား အပြတ်သဘောလား ရှင်းနေပြီ။ နိုင်ငံတကာခုံရုံး အတွက် သက်သေကို ရအောင် မလုပ်တတ်ကြဘူးလား။ အခုနေ BURMA CAMPAIGN ဘာညာဆိုတဲ့အဖွဲ့ တွေကရနေတဲ့ ဒေါ်လာတွေနဲ့ ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုမှာ ကြံ့ဖွတ်ဘက်က ပါခဲ့သူတွေကို မက်လုံးပေးပြီး နယ်စပ်ကိုခေါ်ထုတ်ပါ။ ပြီးနိုင်ငံတကာ ခုံရုံးသက်သေလုပ်ပေးရင် ခိုလှုံခွင့်ပေးမယ်။ သက်သေအဖြစ် ထွက်ဆိုပေးရင် ဒေါ်လာ ငါးသောင်း / တစ်သိန်းပေးမယ် ကြေငြာလိုက်ပါ ထွက်လာကြပါမယ်။
မထွက်လာရင်လဲ သန်းရွှေနဲ့ သန်းဟန်တို့က တနည်းနည်းနဲ့ နုတ်ပိတ်ပစ်တာ ခံရပါမယ်။ ဟိုကလည်း ဘယ်ထားပါ့မလဲ။ အတ္တထိပ်ခေါင်ကြီးဘဲ .. သူ့ကိုထိမယ်ထင်ရင် ဘယ်လောက်ဘဲ သူတို့အတွက် လုပ်ပေးခဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ သူ့ကိုထိခိုက်လာမယ် ထင်ရင် လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ ဘေးချိတ် သတ်မှာဘဲ။ အနုနည်းနဲ့ ရှင်းမှာဘဲ။ အသတ်မခံရရင်လဲ တရက်မှာ နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာ အဖမ်းခံရပြီး သေဒါဏ်ဘဲလေ။ ထွက်လာပြီး ခုံရုံးသက်သေလုပ်မလား၊ သန်းရွှေ နုတ်ပိတ်တာခံမလား၊ နိုင်ငံတကာခုံးရုံးကို ရင်ဆိုင်ရပြီး ကြိုးစဉ်တက်မလား။ ကြိုက်တာရွေးဘဲ။ လမ်း-၃-လမ်း။ အလှည့်ရောက်တော့မယ်။ နွှဲ့ပြဖို့တော့ မစဉ်းစားနေနဲ့။
နောက်ဆုံးတခုကတော့ အလွန်ပွဲဆူနေတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြော ဒုတိယပင်လုံညီလာခံလို့ဘဲ ပြောပြောပေါ့။ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလဲ ကြားဝင်စေ့စပ်ရေး တင်ပြလာပါတယ်။ ဒါလုပ်သင့်တယ်။ လုပ်ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမလုပ်ခင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူမှာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူလက်ခံထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့မူ ကိုတော့ အရင်ချပြထားရပါမယ်။ စစ်အစိုးရမူက ချပြထားပြီးပြီ။ န.အ.ဖ.မူကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘေးချိတ်ထား မြန်မာအများစုကတောင် လက်မခံကြဘူး။ ၉၂.၄၈-% လာမပြောနဲ့။ အဲဒီလောက်ခိုင်မာရင် နိုင်ငံတကာအကဲခတ်တွေ ဖိတ် ထပ်မံအတည်ပြုပေးပါ။ ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့တွေကလည်း အာဆီယံကို န.အ.ဖ. နာဂစ်ဥပဒေကို အကဲဖြတ်သူ လာခွင့်မပေးမချင်း အတည်မပြုကြရန် ပန်ကြားဖို့လိုပါတယ်။ အာဆီယံမိသားစုလို့ ပြောနေတဲ့ အာဆီယံကိုတောင် လာပြီးလေ့လာခွင့် မပေးရင် သူတို့ဥပဒေကို ကမ္ဘာက လက်ခံအောင် အာဆီယံက ပြောပေးဖို့လဲ မလိုတော့ဘူး။ အာဆီယံကိုတောင် လက်မခံရင် သူတို့ကို အာဆီယံက ဘာလို့လက်ခံ နေစရာလိုသေးလဲ ။
အဲဒါကိုထောက်ပြီး အာဆီယံကို တောင်းဆိုတာ လုပ်ရပါမယ်။ ဒါကိုယ့်ဘက်က ဆုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးပါ။ အခုဒေါ်စုက သူလက်ခံထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုမူဆိုတာဟာ ကျနော်တို့ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ န.အ.ဖ.ရဲ့ နာဂစ်မူကို ကျနော်က လုံးဝ လက်မခံနိုင်သလို တိုင်းရင်းသားတွေ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ (ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ/ ရှစ်ပြည်နယ်မူ/ မဲသရောထမူ) ဆိုတာကိုလဲ ကျနော်က ဗမာတယောက်အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ၁၉၆၂-ခုနစ်မှာ ဒီမူတင်လာလို့ အာဏာရှင်စနစ်ကြီး အာဏာသိမ်းဖို့ အကွက်လှလှလေး ဖေါ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ် သွားရတာပါ။ ဖယ်ဒရယ် ဖက်ဒရယ် လုပ်နေပြီး တကယ်တင်ဖို့ လုပ်နေတာ ဖက်ဒရယ်စစ်စစ်မူ ဆိုတဲ့ ရှစ်ပြည်နယ်မူ။ ဒီမူကတော့ ပြည်ထောင်စုကို သေချာ ပေါက်ပြိုကွဲစေမဲ့မူ။ ဗမာအများစုက သေသေချာချာ သဘောမပေါက်ကြဘူး ။ ကျနော်ကရှင်းပြလိုက်မှ ဟာ ဒါကတော့ ဘယ်မျှတပါ့မလဲ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အခုကျတော့ (၁၀- ပြည်နယ်မူ) လုပ်လာပြန်တယ်။ ဧရာဝတိပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီပြည်တဲ့။ ဧရာဝတီလူမျိုးဆိုတာ ရှိမှမရှိတာဘဲ။ တနင်္သာရီလူမျိုးလဲ ရှိမှမရှိတာ။
ဒီရှစ်ပြည်နယ်မူကို တချို့သော တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ဒီမိုကရေစီမူတွေနဲ့ ဖီလာဖြစ်နေလို လက်မခံကြပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ စံတွေနဲ့ ချိန်ထိုးလိုက်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေဆွဲထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူစစ်စစ်က ရိုးရိုးဖက်ဒရယ်မူနဲ့ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဖက်ဒရယ်မူ သြစတေးလျနိုင်က ဖက်ဒရယ်မူတွေက ဖက်ဒရယ်မူ မစစ်တော့သလိုလဲ ဖြစ်နေပါတယ် အခု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ စစ်စစ်ဆိုတာသာ ဆက်လက်ပြီး အသေဆုပ်ကိုင် ထားကြမယ်ဆိုရင် စစ်တပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ ညှိနိုင်းဖို့ စဉ်းစားမနေကြပါနဲ့။ ဘယ်လိုမှ နီးစပ်နိုင်စရာ လမ်းစပင်မမြင်ပါဘူး။ အဲဒီမူကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်နေတာဟာ အာဏာရှင်ကို တဖက်လှဲ့ အားဆေးထိုးပေးနေရာ ရောက်နေပါတယ်။ အမြင်တွေ ကျယ်ကျယ်ထားဖို့ လိုနေပါပြီ။ အာဆီယံကပင် စစ်တပ်အာဏာ လျှော့လိုက်တာနဲ့အာရှ ဘော်ကန်အရေးအခင်း (ဘော့စနီးယား) ဖြစ်လာမယ် ပြောလာကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ကြားဝင် ဖျန်ဖြေပေးမယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် လက်ခံနိုင်မဲ့ ပြည်ထောင်စုမူ ကိုတော့ ဦးစွာ တိုင်းပြည်သိအောင် ချပြထားရန်လိုပါတယ်။ စစ်တပ်ကသိအောင်လဲ ချပြထားရပါမယ်။ ဒီကိစ္စဟာ တချပ်မှောက် ဖဲလိုလုပ်ရမဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တတိုင်းတပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တော့ ပွင့်လင်းထင်သာ မြင်သာရှိရပါမယ်။ ဒါကိုချပြပြီးမှဘဲ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း စဉ်းစားလို့ရပါမယ်။
ရေးတာလဲ အတော်လေး ရှည်သွားပါတယ်။ ကျနော်စိတ်ကူးထားမိတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို ဆက်လက် တင်ပြပေးပါမယ်။ ကျနော်ကတော့ ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးနှစ်ခု အမေရိကန်နဲ့ သြစတေးလျ ပုံစံကို အတုယူတာ ကပိုပြီး လျှော်ကန်သင့်မျှတယ်လို့ဘဲ မြင်ပါတယ်။ မြန်မာအများစုနဲ့ တပ်မတော်လဲ လက်ခံနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
အချုပ်အနေနဲ့က ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တပ်မတော်ဆိုတာက မရှိလို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ တပ်မတော်ကို ဖျက်ပြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ စိတ်မကူးသင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက်တွေ နီးစပ်အောင် လုပ်ဖို့ဘဲစဉ်းစားပြီး ညှိနိုင်းယူကြရမှာပါ။ ကိုယ်စိတ်ထဲလိုချင်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ မရရင်ချဆိုတဲ့ ပုံစံတွေ မထားသင့်ကြပါဘူး။ တခါ အခုနိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လမ်းကိုလှမ်းကြမှာလဲ။ ဘယ်လို လျှောက်ကြမှာလဲ.. ဘယ်လောက် အချိန်မှန်းဆထားလဲတွေကို ပြည်သူတွေသိသင့်လို့ ချပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ချပြတဲ့ အချိန်ဇယားအတိုင်း ဖြစ်လာရမယ်လို့ အာမခံခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအရေးဘဲ အတိအကျ တွက်ဆလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘောင်လေးချပြီး ရည်မှန်းချက်လေး ထားတာတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ မသေချာမရေရာ ဇယားမရှိတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အခနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ တပ်မတော်လက်ဝေခံ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ရင်ဆိုင်နေတဲ့နေရာမှာ မူလေးတွေ ဗျူဟာတွေ တော့ချထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမူချမှတ်ရာမှာ ကိုယ်ဘက်က အားသာချက် အားနညးချက်တွေကို သဲသဲကွဲကွဲ တွက်ဆထားပြီး သူဘက်က အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ကိုရှာကြံပြီး အဘက်ဘက် လူအများစု အမြင်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက် ဆွေးနွေးအကြံဥာဏ်တွေ ထုတ်ပြီးမှ ဗျူဟာတွေ ချမှတ်ရပါမယ်။ ဒီလိုဗျူဟာချပြိး လုပ်ဆောင်ရာမှာတောင် ပထမ ဦးစားပေးဗျူဟာ မအောင်မြင်ရင် ဒုတိယဗျူဟာ တတိယဗျူဟာ အဲဒီလိုကိုအဆင့်ဆင့်ရေးဆွဲထား ဆွေးနွေးထားရပါမယ် ။
ဟာဗျာ ဒါတော့ ပါတီအရေး လုပ်နေသူတွေ လုပ်ထားမှာဘဲလို့ ပြောလာစရာရှိတာပေါ့။ မရှိပါဘူးလို့ ကျနော်မငြင်းပါဘူး။ အတွေ့ အကြုံအများကြီးရှိတဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး အရာရှိကြီးတွေ ပါဝင်နေတာဘဲ။ ရှိမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာ ဒေါ်စုကို ထိန်းလိုက်ရင်အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ထိရောက်တဲ့ စွမ်းဆောင် မပြနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကလက်တွေ့ရလဒ်ပါ။ ဒေါ်စုမရှိတော့ရင် ဒုတိယတန်း ခေါင်းဆောင် ပျောက်သွားတဲ့ အထိကျန်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့သာ နောက်ထပ် ဒေါ်စုကို ထိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒုတိယတန်း ခေါင်းဆောင်ကို ရဲရဲဝ့ဝံ့ ဦးဆောင်ခွင့် ပေးထားဖို့ လိုနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအားနည်းချက် ရှိနေတော့ စစ်တပ်က ဒေါ်စုကို ကစားကွက်တခုလို လိုသလို ထိန်းကစားနေတာ ခံနေရပါတယ်။
တခါဗျူဟာတွေမှာ (ဥပမာ-မူဝါဒရေးရာမှာ) ဘယ်ဟာက အသေဆုပ်ကိုင် ထားရမယ်။ ဘယ်အပိုင်းကိုတော့ အလျော့အတင်း လုပ်နိုင်တယ်။ ဘယ်ပန်းတိုင်ကတော့ ပဓါန ထိပ်တန်းဦးစားပေး တိုက်ရမယ်။ ဘယ်လှုပ်ရှားမူ ကတော့ သာမည စတာတွေကို ပါတီဝင်တွေ ကျေကျေညက်ညက် နားလည်အောင် ချပြထားရပါမယ်။ အခုဆိုရင် အကျဉ်းသားလွှတ်မြောက်ရေးက အဓိကလား လူမှုရေးအလုပ်က အဓိကလား နိုင်ငံရေးကအဓိကလား ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး။
တခါအကျဉ်းသား လွှတ်မြောက်ရေးမှာကို လက်မှတ်ထိုးကမ်းပိန်းက ပိုအရေးကြိးတာလား ဘုရားတက် ဆုတောင်းတာက ပိုအရေးကြီးတာလား လူတွေ မသဲကွဲကြပါဘူး။ နောက်တခု ကိုယ်နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တပ်မတော် ဘက်က အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ အသေအချာ လေ့လာပြီး တိုက်ကွင်း တိုက်ကွက်ကို ဖေါ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဥပမာ ပြည်ပမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး တကျော့ပြန်လိုင်းတင် လာတာမျိုးဟာ ကိုယ်က လူဗလန်လေးဖြစ်ပြီး လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ မိုက်တိုက်ဆန်ကို လက်သီးထိုးကြေးသွား စိန်ခေါ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ကြကြေး ဆိုရင် စစ်တပ်အကြိုက်ပေါ့။ အာဏာမလွှဲချင်လို့ စစ်တပ်အခန်း ဂဏ္ဍကို ကြီးသထက်ကြီးအောင် လုပ်ချင်နေသူတွေကို မီးလောင်ရာ လေပင့်တဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်သင့်တော့ပါ။
နောက်ဗျာ မပြောချင်လို့ မပြောလာတာပါ။ ၈၉-မှာ ကျနော်ကို အရာရှိကြီးတဦးက ပြောပါတယ်။ ကိုလှိုင်မြင့် အခု (ဘာခေါင်းဆောင် ညာခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာ) စက်တင်ဘာ-၁၉-ရက် အာဏာသိမ်းအပြီးမှာ သူတို့ကို လမ်းပေါ်ထွက်လာအောင် ကျနော်တို့ မြုပ်ထားတဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ ဘယ်မှာ ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေပြီ လာကူပေးပါဦး ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးမြှား ခေါ်ထုတ်တယ်ဗျာ။ ထွက်လာတာနဲ့ ရုံးရင်းဆန်ခတ် ပွဲဆူအောင်လုပ်ပြီး အသေဆော်မလို့ပါတဲ့။ စနိုက်ပါသမားတွေ အဆင်သင့် လုပ်ထားတာတဲ့ တယောက်မှ ထွက်မလာပါဘူးဗျာတဲ့။ ခေါင်းလေးတောင်ပြူ မလာဘူးဗျာတဲ့။ ဒါကို မပြောချင်ဘူးဗျာ။ ကိုယ့်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ဂုဏ်ကိုထိခိုက်လို့။ ဒါပေမဲ့ သူရဲကောင်းပုံ ဖမ်းလာတာများလာလို့ ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဂရိပုံပြင်ဆရာကြီး- အီစွတ် AESOP ပြောသလို IT IS EASY TO BE BRAVE FROM A SAFE DISTANCE လုံခြုံစိတ်ချရသောအကွာအဝေး ကနေ သတ္တိပြရတယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။
စစ်တပ်မှာ ဘယ်ဟာမှာ အားနည်းနေလဲ။ အဲဒီအစကို ဆွဲဖေါ် ထုတ်ကိုင်ရပါမယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အမတန် အတ္တကြီးမားပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန် လုပ်ထားတော့ လွှဲမှားနေတာက အများကြီးမှ အများကြီး။ အဲဒီမှားနေတာတွေထဲက ပြည်သူလူထု နစ်နာနေတာတွေကို ဇောင်းပေး ဖေါ်ထုတ်ပြီး တိုက်ဖို့ကို ဗျူဟာဖေါ်ရပါမယ်။ နောက်အရင်လဲ ရေးဖူးပါတယ်။ အစိုးရတရပ် အသက်ဆက်ဖို့ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကြီး လည်ပတ်နေဖို့ လုပ်ထားရတာပါ။ န.အ.ဖ.ဟာ အဲဒီယန္တရားကြီး လည်ပတ်ဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်အားကို အဖိုးအခ နည်းနည်းလေးပေးပြီး လည်ပတ်နေစေတာပါ။ အဲဒါကို ပြည်သူတွေ သိလာအောင်လုပ် ပြည်သူတွေ လုပ်အားအပေါ် ဂုတ်သွေးစုပ်နေတာတွေကို ရပ်သွားအောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။ အခုဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကို တနေ့ကို (၁၀-ဒေါ်လာ) နှုန်း သတ်မှတ်ပါတော့မယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ထိုင်းရဲ့ တ၀က်- (တနေ့ ၅-ဒေါ်လာနှုန်း) သတ်မှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုတာမျိုးကို ပါတီကြီးတွေက လိုင်းတင်ပေးရဲဖို့ လိုပါတယ်။
တနည်း ပြည်သူ့လုပ်အားကို ခိုင်းစားနေတာကိုတော့ ရပ်အောင်လုပ်လို့ ကမရဘူး။ ပြည်သူက အလုပ်ရှိမှ စားရမှာ။ လုပ်အားခ တိုးပေးလာအောင် တိုက်ပေးရမယ်။ လုပ်အားခ တိုးတောင်းတာ ဗျူဟာချလာရင် ပြည်သူတွေ ပါလာမယ်။ အစိုးရက လုပ်အားခ တိုးပေးလာရရင် ယန္တရားကြီး လည်ပတ်ဖို့ ငွေပိုပြီးလိုလာမယ်။ ငွေပြတ်လာရင် ကြံ့ဖွတ်လို လူမိုက်တွေ အလကားမွေး မထားနိုင်တော့ဘူး။ တခါ အကုန်အကျ ကြီးမားလာလေ အခွန်ငွေပိုလိုလာလေ။ အဲဒီမှာ အရင်ခိုးထားသူတွေ အာဏာသုံး အခွန်ရှောင်နေသူတွေနဲ့ သမ္မတကြီး ထိပ်တိုက်တွေ့ ရပါတော့မယ်။ သူတို့ ချင်းချင်း ရှင်းကြရပါတော့မယ်။ အခုခေါင်းမာတယ်ဆိုတဲ့ ဒု-သမ္မတရှစ်လုံးလို မတရားချမ်းသာပြီး အခွန်ရှောင်ထားသူတွေကို သူတို့ဘာတွေ ပိုင်ထားပါတယ်။ ဖေါ်ထုတ်ပေးရုံနဲ့တင် သူတို့ချင်း အိုးမဲသုတ် အခွပ်ခိုင်းရပါမယ်။
လွယ်လေးလုပ်နိုင်တာက နိုင်ငံတကာမှာ (ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာ) အမတ်လောင်းတွေဟာ အခွန်ရှောင်ထားခြင်း မရှိပါဘူး ကတိခံဝန်ချက် ထိုးတင်ကြတယ်။ မိမိနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တရားဝင် ကြေငြာထားကြတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား အမတ်မင်းတွေက ဦးသိန်းစိန်က လုပ်ပါမတောင်းဆိုလဲ အများစုက ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ကြေငြာပြီး သမ္မတကြီးဆီ လွှတ်တော်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါ။ မတင်သူဟာ သူ့အလိုလို သူခိုးလူလိမ် ပိုင်ဆိုင်တာတွေ မတရားများနေတာပေါ်ရော။
အဲလိုတင်တာကို သမ္မတကြီးက လက်မခံရင်ရတယ်။ သူဘာဖြစ်သွားမလဲ။ လက်မခံလို့လဲမရ လက်ခံပြန်ရင်လဲ ကိုယ်လူတွေက သူခိုးတွေဆိုတာ ပေါ်လာမယ်လေ။ ဒု-သမ္မတကြီးကတော့ အရမ်းရမ်းနှာတင်းပြီး အာဏာပြန်သိမ်းဖို့တွေ လမ်းထွင်ယူရပါမယ်။
အဓိက ကတော့ ထိုင်းစစ်သားလစာ (စစ်မတိုက်ရတဲ့) နဲ့ တနှစ်ပတ်လုံး ရှေ့တန်းထွက် နေရှာကြရတဲ့ မြန်မာစစ်သားလစာ ဘယ်လောက်ကွာနေတယ်ကို မီဒီယာကြီးတွေက မီးမောင်းထိုးပြ ကြစေချင်ပါတယ်။ စစ်သားတွေ လစာကိစ္စ မကြေလည်နေတာကို အသာလေးဖွပေးရုံနဲ့တင် နိုင်ငံရေးဆရာကြီးများ မီဒယာကြီးများ ခင်ဗျာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးတလေ ကိုယ့်ဘက်ပါဖို့မျှော်တာဘဲလုပ်နေကြတယ်။ စစ်သားတွေ အားလုံးနီးနီး ပုန်ကန်စေချင်ရင် မီဒီယာကြီးများ အသံလေးထုတ်ရုံနဲ့ယမ်းပုံကြီးမှ အကြီးကြီးပါ။ ခက်တာက မီဒီယာကြီးတွေမှာ န.အ.ဖ. စပိုင်တွေ စီးထားတာကြာပါပြီ။ မီဒီယာကြီးတွေက အော်တော့အော်တယ် တာဝန်ကျေ အပြသက်သက် လုပ်နေကြတာ။ န.အ.ဖနဲ့ အစိုးရကို တကယ်ထိမှာ တွေ့ကျတော့ ပညာသားပါပါ ပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်။ တရက်အဲ့ဒီ စပိုင်တွေ ပေါ်လာပါမယ်။
န.အ.ဖနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်တွေက အများကြီးမှ အများကြီး။ တကယ်ကွဲအောင် ထိုးချင်ရင် သိပ်စဉ်းစားနေစရာ မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်နေသူတွေလဲ သိတာပါဘဲ။ မသိမရှိပါဘူး.. ဒါမှမသိရင်လဲ ခေါင်းဆောင် လုပ်မနေပါနဲ့တော့။ ဘာလို့ တကယ်ကွဲမယ့် တိုက်ကွက်ကို မဖေါ်ချင်တာလဲ။ ပြည်သူလူထု အသက်အိုးအိမ်ရင်းရတဲ့ လူထုအုံကြွမှုကိုမှ ဖေါ်ချင်တာလား။
အဲဒီလို ကိုယ်တိုက်ကွက်တိုင်းဟာ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ရလာမယ်ဆိုတာ အကွက်ချစဉ်းစားပြီး တိုက်ကွက်ကို ဖေါ်ကြစေချင်ပါတယ်။ တပ်မတော်မသိအောင် ဘာညာ လုပ်မနေစေချင်ပါဘူး။ မဟုတ်လဲ သူတို့က ရအောင်ယူနေတာပါဘဲ။ ပေါ်တင်သာချပြ ဆော်ရပါမယ်။ ပြည်ပအတိုက်အခံတွေကလည်း တခါလာ ဆန္ဒပြတာလောက်နဲ့ ရပ်နေကြတာကိုလဲ ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ အခုကျနော်တို့ သြစတေးလျမှာဆို ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် မြို့ တော်က ကမ်ဘာရာမှာ ဆစ်ဒနီကနေ ကီလို-၃၇၀- ဝေးတယ်။ မဲလ်ဘုန်ကနေဆို ၅၅၀-လောက်ေ၉းတယ်။ ကားကြီးတွေငှား သွားကြရတယ်။ လမ်းစားရိတ် အစားအသောက်ပေါ့။ တခါဆန္ဒပြဖို့ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေက (ဆစ်ဒနီနဲ့ မဲလ်ဘုန်းနစ်မြို့ပေါင်း) ဒေါ်လာ- ၅၀၀၀-မကဘူး။ ဒီငွေတွေကို တခုခုစီမံချက်ချ လုပ်ရင်ပေါ့။
နောက်တခါ ပြည်ပအတိုက်အခံတွေထဲမှာလဲ နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေကို အချင်းချင်း ကန်ထုတ်နေကြတာလဲ တော်တော်လေး အရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ ဘာညာ ဥက္ကဌ ဆိုတာကိုလဲ ရာသက်ပန်ယူချင်တဲ့ ရောဂါကလဲမသေးလှဘူး။ ပိုဆိုးတာက တချို့ဆိုရင် လူကသန်သန်မာမာကြီး နိုင်ငံရေးကိုတော့ ဦးဆောင်ချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအထောက်အပံ့ကို လိမ်ညာယူနေတယ်။ ပြီးတချို့ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလေးတွေ လုပ်ကြီးပွားနေတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိရင် တရားဝင် ကြေငြာရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကိုလိမ်ညာပြီး ၀င်ငွေမရှိ လိမ်ညာ အခွန်ရှောင်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိထားတဲ့ ဘာမှအမျိုးတောင် မတော်ဘဲ အများကြီး ကူညီထားတဲ့ အစိုးရကိုတောင် ပြန်လိမ်နေတဲ့သူတွေနော်။ ဒီလိုလူလိမ်တွေက နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်နေတာလဲ ရှိတယ်။ အားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပ ။ ဒါပေမယ့် အများကြီးရှိတယ်။
လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးကလည်း စစ်အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့ နင်လားငါလား မတိမ်းမယိမ်းဘဲ။ ဥပမာ FORUM ပေါ့ ခေါ်တယ်။ ဖိုရမ်ဆိုတာ အီတလီ စကားကလာတာ လူထုအများ စိတ်ဝင်စားတာကို လူထုအများစု ဝေဖန်ဆွေးနွေးပွဲပေါ့ ။ ကျနော်ကြုံနေတဲ့ ဖိုရမ် နစ်မျိုး ။ မလေးရှားမှာ ၀န်ကြီးချုပ်( ငြိမ်း )မဟာသီယာ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် ။ ဟော်တယ်ကြီးမှာ လူအများကြီးတက်ရောက်နိုင်အောင်စိစဉ်ထားတယ်။ စဉ်ပေါ်က ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ်ကို မဟာသီယာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ လက်ထောက် ( ငြိမ်း) တွေ ပါရဂူတွေက နာရီဝက်လောက် ဟောပြောတယ်။ အဲဒါကိုလူထုက ၂- ၃-နာရီလောက် ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြီးအများစု လူထုအများစု သဘောထားကို လက်ထောင်ဘာညာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ယူတယ်။ တနေကုန် ဆွေးနွေးတာ မှ -၂ရက်တိတိ။ ဆွေးနွေးချိန်က -၂-ရက်ပေါင်း စုစုပေါင်း ၁၄-နာရီလောက်ရှိတယ်။
မြန်မာအတိုက်အခံတွေရဲ့ ဖိုရမ်မှာ အချိန်ယူထားတာက အားလုံးမှ (၂-မှ ၄-နာရီ)။ စဉ်ပေါ်က ဆွေးနွေးတာက (တကယ်က လက်ချာရိုက်နေတာ)က အချိန်အများကြီး။ လူထုကို နှစ်ဦး သုံးဦးလောက် နှစ်မိနစ် မှ ငါးမိနစ်မေးပါတဲ့။ အဲဒီလို.. အဲဒီတော့ ဒီမှာ ဖိုရမ်ဖိတ်ရင် ကျနော်ကမေးတယ် လက်ချာလား/ ဖိုရမ်စစ်စစ်လား ဆိုတော့ကျနော့်ကို မကြည်ဘူး။ မဖိတ်တော့ဘူး။ ဖိတ်လဲတက်စရာ မကောင်းတော့ဘူး။ ရသလောက် လိမ်နေတာလေ။
နောက် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့က တလောက မလေးရှားက NLD (LA/Malayisa) က လုပ်ကြံပြီး ရဲကို တဖက်လှဲ့နဲ့တိုင် (လာဘ်ထိုးပြီး) ကိုယ့်မြန်မာချင်းပြန် အဖမ်းခိုင်းတဲ့အထိ ဖေါက်ပြန်လာတာတွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်ပမှာ NLD (LA) ဆိုတာ NLD နာမည်ကိုသုံးစားခွင့်ကို ပြည်တွင်းကအဖွဲ့ချုပ်က ပေးထားတာပါလား။ မဆိုင်ဘူးလား တိတိပပလေး ကြေငြာပေးဖို့ လဲလိုနေပါတယ်။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ အဖွဲ့ဝင်ကဒ်တခု ရဖို့လေးတင် ရင်းဂစ်-၃၇၀- ( ဒေါ်လာနဲ့ဆို - ၁၁၀-ဒေါ်လာ) လောက်ကောက်စားနေတာ အဖွဲ့ ဝင်-၅၀၀၀-လောက်ရှိတော့ ဒေါ်လာ- ငါးသိန်း/ လောက် ကိုယ်မြန်မာအချင်းချင်းဆီက ၀ိုက်ထားတာကို မသိကျိုးကျွန် ပြုမထားသင့်ပါဘူး။ နောက်လစဉ်ကြေးဆိုတာက တလကို- ၁၀-ရင်းဂစ် (၃-ဒေါ်လာ) တလတလကို လစဉ်ကြေးကတင် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀-လောက် ၀ိုက်နေကြတာမျိုးတွေကို NLD နာမည်တပ် လုပ်စားနေကြပါတယ်။ တကယ်ဆို NLD နာမည်ခံထားရင် ဒီငွေစာရင်းဇယားကို NLD ကိုပြန်လည်တင်ပြ အစီရင်ခံရပါမယ် ။
ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် တခြားသူတွေလဲ NLD နံမည်သုံးခွင့်ရှိတာပါဘဲ။ နောက်ဆုံး အခုအဖမ်းခံရတဲ့ လူတွေကလဲ တိုင်တဲ့အဖွဲ့ ရဲ့အဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းတွေပါဘဲ။ အဲဒီမှာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် (ဒီမိုကရေစီ စံလေး)ကိုတောင် သူတို့ မသိနားမလည်တာကို ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ စံကို အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဗိသုကာတဦးလဲဟုတ် အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကို နှိုးဆော်ပေးလိုက်တဲ့ COMMON SENCE စာတမ်းကြီးကို ရေးသားခဲ့တဲ့ THOMAS PAINE ရဲ့ အဆိုအမိန့် လေးကိုတောင်မလေးရှား NLD (LA) က မသိကြတဲ့အထိ ဖေါက်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။
HE , THAT HAS SECURED HIS OWN LIBERTY , SHOULD GUARD EVEN HIS ENEMY FROM OPPRESSION , FOR " IF HE VIOLATES THIS DUTY , HE HAS ESTABLISHED A PRECEDENCE , THAT WOULD REACH TO HIMSELF , ONE DAY .
မိမိရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပြီးသူတဦးဟာ မိမိ၏ရန်သူကိုပင် မတရားဖိနှိပ်မှုများမှ အကာအကွယ်ပေးရပါမည်။ အကယ်လို့ ထိုသူသည် ၎င်းတာဝန်ကို ပျက်ကွက်ခဲ့ပါလျှင် သူဟာ တရက် မိမိထံ တပတ်လည်လာမည့် စံနစ်ဆိုးကြီးကို အစပျိုးမိလျှက်သားဖြစ်သွားပါသည်။
မလေးရှားမှာ ဖြစ်သွားတာက ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း နောက်ကိုယ်လူဟောင်းတွေ နောက်ဒီမိုကရေစီ နံမည်ခံသူ အချင်းချင်းကိုပင် မတရားဖမ်းဆီးစေတာဟာ အာဏာရှင်ညဉ်ဆိုးကို ငွေပေးပြီး မွေးယူနေတာပါဘဲ။ တကယ်ဆို မလေးရှားရဲက ဖမ်းရင်တောင် ကျနော်တို့ လူတွေဆိုပြီး လိုက်ကယ်ထုတ် ပေးရမဲ့တာဝန်ရှိနေသူတွေပါ။ အခုတော့ ပြောင်းပြန်လုပ်နေကြတာ။
ဒါအခုတကြိမ်သာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ကျနော်ကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့ မလေးရှားကို အခု ဗိုလ်ချုပ်သန်းဟန် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တခုကို လွှတ်ခဲ့တော့ အခုမလေးရှား- NLD( LA ) တွေက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မယုံရင်အခု အဲဒီအဖွဲ့နဲ့ ခွာပြဲသွားတဲ့ လူငယ်တွေရှိပါတယ်။ အားလုံးသိကြပါတယ် မေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလောက်အထ်ိကို ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးပါ။ ဟိုဘက်ကလဲ သိန်းကိုထောင်နဲ့ချီိပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တော့ ဆရာလှိုင်မြင့်လဲ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ Burma Refugee Organization (BRO)ကို မေးကြည့်လဲရပါတယ် ။
တခါပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အဖွဲ့ရဲ့ကြေငြာချက် အဖွဲ့ရဲ့စာစောင်တွေမှာ စည်းရုံးရေးဘာညာ ရေးထားတယ်။ မယုံရင်တခါတလေလောက် ကျနော်က ဘယ်သူပါဘာညာ ရေးဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။ အကြောင်းပြန်လာမယ် ထင်သလား။ သိသူမဟုတ်ရင် ဆောရီးဘဲ။ လူကြားကောင်းအောင်လုပ်နေကြတာ။ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ (စကိုက်ပေါ်ကနေ ဆွေးနွေးပွဲ)ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ကျနော်အလုပ်ကခွင့်ယူပြီး ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်တယ်။ တမိနစ်လောက်နေတော့ ဘလောက်လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်မကြာဘူး အဲဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီး ဘာအဖွဲ့ ညာအဖွဲ့ ဆိုပြီးဖွဲ့ကြတယ်။ ပြီးပျက်သွား အိယောင်ဝါး ပြီးသွားတာဘဲ။
အချုပ်အနေနဲ့ ၂၃-နစ်အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပြီ။ ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ကို ပြောလို့ရနေပါတယ်။ တိုးတက်မှုအချို့ ရခဲ့ပါတယ်။ အတော်လေး ပေးဆပ်ပြီးမှ ရခဲ့တာပါ။ လမ်းပြမြေပုံဟာ ဒီပဲယင်း ပေးဆပ်မှုကြောင့် ပေါ်လာရတာပါ။ တခါအမျိုးသားညီလာခံကြီး ပြီးပါပြီဆိုတာကလည်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပေးဆပ်လိုက်ရတာပါ။ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေ အသက်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာလဲ ရွှေဝါရောင်ပေးဆပ်မှုပါဘဲ။ တခုမှ ပေါပေါလောလောရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ န.အ.ဖ. သိပ်ပျော်နေပါမယ်။ အခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာ ငွေပြတ်လပ်မှု ကြုံနေပါပြီ။ စီးပွားရေးညံ့တဲ့ အစိုးရကို စီးပွားရေးနဲ့ တိုက်ရပါမယ် တခြားတိုက်ကွက်တွေထက် စီးပွားရေးနဲ့ မွှေရင် ထိကိုထိတာမို့ အဓိကထားပြောနေရတာပါ။ တခြားသူတို့ အားနည်းတာတွေ တပုံကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့အားနည်းတဲ့ ဘက်ကို စစ်မျက်နှာဖွင့် တိုက်ရပါမယ်။ သူတို့အားသာဘက်ကို စစ်မျက်နှာဖွင့်ချင်သူတွေဟာ ဦးဏှောက်နည်းတာလား ရန်သူမြုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဘက်သားလား ဆိုတာကို လေးလေးနက်နက်ချင့်ချိန်ဖို့ အချိန်ကျနေပါပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးရင်း။
ဆောင်းပါးရှည်သွားတာကို သည်းခံဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချုပ်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းက ပါတီကြီးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပြည် ပကနေပြီး ဒေါ်လာကောင်းကောင်းရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကိုပြည်သူလူထုကိုယ်စား မေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘယ်အချိန် အတိုင်းအတာ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေ ချထားပြီး ဘယ်လမ်းလျှောက်လို့ ဘယ်ခရီးလဲ။ လူထုဘက်က လိုအပ်ချက်လား ကိုယ်ဘက်ကလိုအပ်ချက်လား။ တော်လှန်ရေး (REVOLUTION) နည်းနဲ့သွားမှာလား (EVOLUTION) တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းမဲ့လမ်းလား ပြည်သူတွေကို တိတိကျကျ အသိပေးချိန်တန်ပါပြီ။
တကယ်လို့ တော်လှန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေရပ် စီးပွားရေးပိတ်ဆိုတာ ဆွဲကိုင် နိုင်ငံတကာခုံရုံး တင်နိုင်အောင်အပြတ်လုပ်။ လူထုတော်လှန်ရေးကို ဖေါ်နိုင်အောင်လုပ်။ လူထုလမ်းပေါ် ထွက်လာရင်လဲ ခေါင်းဆောင်တဦးတလေ လောက်တော့ ထွက်ခဲ့ကြပါဦး။ လူထုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ တခါမှခေါင်းဆောင်တွေ မပါကြဘူး။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တစတစပြောင်းယူမယ်ဆိုရင်လဲ ပူးပေါင်းပါ။ .ကိုယ့်မှာ အရည်အချင်းရှိထားရင် သူခိုးတွေ လူလိမ်တွေကို ယှဉ်ရမှာဘာမှ သိပ်ကြောက်နေစရာ မလိုပါဘူး။ အလကားအကောင်တွေပါ။ တကယ်တန်း ယှဉ်ရမယ်ဆိုရင် ဂုဏ်သိက္ခာကို ယှဉ်တာမျိုးတွေ ဆွဲထုတ်ပါ။ သူဟာနဲ့သူ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ဘာညာပြပြီး အမြှီးကုတ် ထွက်သွားကြမှာပါ။